नेपाल आज | ‘मलाई अब कसैको डर छैन, हजार पल्ट भन्छु, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा दिलिप नै हुन्’
‘मलाई अब कसैको डर छैन, हजार पल्ट भन्छु, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा दिलिप नै हुन्’
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या भएको एक वर्ष पुग्दासमेत हत्यारा पत्ता नलागेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा सो घटनाको अनुसन्धान गर्ने सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसीले हत्यारा पत्ता लागेको दोहोर्याएका छन् । भिआइी अपराधी जोगाउन मानसिक रोगी दिलिपसिंह विष्टलाई फसाउन अंगुर जिसीले भूमिका निर्वाह गरेको भनेर उनलाई नेपाल प्रहरीले अहिले निलम्वन गरेको छ । तर उनले अहिले पनि दिलिपसिं विष्ट नै अपराधी रहेको दावी गरेका छन् ।
उनले घटना, दिलिपसिंह विष्ट, डिएनए र भ्रमका विषयमा विस्तृत रुपमा यसरी वर्णन गरेका छन् ।
‘म सिआइबीमा कार्यरत थिए । घटना भएको तीन चार दिनपछि म कञ्चनपुर पुगेँ । अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्यौं । करिब २५ दिन हामी कञ्चनपुर बसेर धेरै मानिसहरुसँग सोधपुछ पनि गर्यौं । जब हामीले दिलिपसिंह बिष्टलाई गिरफ्तार गर्यौं, त्यसपछि उसको साबिति बयानले हामी ‘शक्ड’ भयौं । किनभने उसले अपराध स्वीकार गर्यो । उसले भनेभने जसरी नै बलात्कार भएको प्रमाणहरु पनि थिए । उसले साबिति बयान दिँदैमा पनि प्रहरीले मान्दैन सजिलै । उसले दिएको बयानसँग मिल्ने आधार र अरु प्रमाणले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ ।
हामीले घटना र प्रकृति हेरेर यो तरिकाले बलात्कार र हत्या भएको हुनुपर्छ भन्ने आँकलन गरेका थियौं । त्यो आँकलनसँग मिल्ने गरी दिलिपसिंह बिष्टको बयान थियो । चार पाँचवटा टेक्निकल विषय पनि उसले भन्न सकेको छ । जुन अपराध नगर्नेले भन्न सक्दैन ।
२०७५ साल साउन १० गते ११ बजे निर्मला होमवर्क गर्न भनेर आफ्नो साथी रोशनी बमको घरमा गइन् । रोशनी बमको घरबाट निर्मला २ बजेतिर निस्किन् । उनको साइकल बम दिदीबहिनीको घर र निर्मलाको घर जाने बाटोकै नहरमा चार बजे भेटिएको छ । निर्मलालाई बम दिदीबहिनीको घरमा मारेको भए साइकल किन नहरमा ल्याउनु ? निर्मलालाई ओपेरा होटलमा मारेको भए पनि साइकल किन नहरमा ल्याउनु ? निर्मलाको हत्या अन्तै गरेर साइकल मात्रै फाल्न दिउँसो जानु भनेको जोखिम उठाउनु हो । हत्याराले त्यस्तो गर्दै गर्दैन ।
बम दिदीबहिनीको घरबाट निर्मला निस्किन् । साइकल भेटिएको स्थानमा निर्मला ‘इनकाउन्टर’ भइन् । अर्थात नहरमा निर्मलालाई जसले भेट्टायो उसैले जबर्जस्ती नहरपारि लग्यो । त्यो पनि १०० मिटर परको पुलबाट होइन, नहरकै पानी हुँदै अर्को ठूलो मान्छेले त्यहाँबाट निर्मलालाई जबर्जस्ती लग्यो । घटनास्थलमा एक ठूलो मान्छेको पाइलाको डाम पनि छ । त्यसरी लैजाने मानिस भनेको निर्मलासँग अपरिचित थियो । चिनजानको भए फकाएर पुलबाटै पारि पुर्याउन पनि सक्थ्यो । यसकारण हामीले त्यो व्यक्ति निर्मलासँग अपरिचित हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
जुन उखुबारीमा निर्मलाको शव भेटिएको छ, त्यसमा माथि टिसर्ट लगाएको, घोप्टो परेको, सुरुवाल खोलिएको, एक खुट्टामा भने सुरुवाल नखोलिएको अवस्था छ । औंला उखुमा समातिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ ।
भनेपछि उनले त्यही स्थानमा प्राण त्यागेको हो जस्तो देखिन्छ । यसले हामीलाई केही कन्फ्युजनमा पनि पारेको छ । तीन चार दिनसम्म उनले त्यहाँ प्राण त्यागेको हो कि होइन भन्ने कुराले इलुजन सिर्जना गर्यो । पछि मैले उत्तानो परेको फोटो पनि हेरेँ । ती फोटोमा पनि हातको औंला कक्रक परेको देखिए । चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गर्दा के पत्ता लाग्यो भने मानिस मरेको तीन चार घण्टापछि मानिसको हातका औंला खुम्चिन्छन् । हात पनि कक्रक्क पर्न थाल्छ । अर्थात मृतकको हातका औंला क्रमशः खुम्चिन्छ । त्यहाँ जे भेटिन्छ, त्यसलाई समाउँछ । वा समाएको जस्तो देखिन्छ ।
पोष्टमार्टममा घाँटी थिचेर मारिएको उल्लेख छ । देब्रे हातले थिचेर मारिएको रिपोर्ट छ ।
भिभिआइपीलाई जोगाउन प्रमाण नष्ट
अहिलेसम्म हामीले प्रमाण नष्ट गरेको भनेर भएको प्रचारलाई चिर्न सकेका छैनौं । सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रमाण नष्ट गरेको भनेर निर्मलाको कपडा पानीमा चोबलेको, निर्मलाको तीघ्रा र गुप्तांगमा पानीले पखालेको र छोपेको देखिन्छ । त्यही कुरालाई प्रमाण नष्ट गरेको भनिएको छ । निर्मलाको कपडा धोएर प्रमाण नष्ट गरिएको भनिएको छ । तर म यहा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि निर्मलाको कपडा प्रमाण हो कि होइन ? निर्मलाकै शरिरमा अड्किएको कपडा निर्मलाकै हो भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि त्यो कपडा पानीमा चोबल्दैमा प्रमाण नष्ट हुँदैन ।
जतिबेला निर्मला भन्ने चिनिएको छैन । शव कसको हो भन्ने थाहा छैन भने त्यो बेला उनको कपडा सुरक्षित राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । भिआइपी अपराधीले प्रमाणको रुपमा लुगा छाडेको र त्यसलाई धोएर उसलाई जोगाउन खोजेको भनिएको छ । भिआइपी अपराधीले लुगामै आफ्नो प्रमाण राखेको थियो होला त ? लुगा जुन अवस्थामा देखिएको छ, त्यसबाट हामीले हेर्ने भनेको कपडामा निर्मलाको रगत, अपराधीको वीर्य र उसको गुप्तांगको रौं हेर्ने हो । रातभर पानी परेको छ । पानी, हिलोमा छ कपडा । त्यस्तोमा वीर्य रगत रहि रहन्छ होला ? यस्तो अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्ने भनेको डिएनए परीक्षण हो ।
सुरुवाल पखालेको प्रमाण नष्ट गर्न हो कि होइन त ? एक महिला सिपाहीले गुप्तांग छोप्न, हिलो लागेको सुरुवान पानीमा चोबलेर गुप्तांगमा राखिदिएकी छिन् । त्यो पनि भिडियो खिचिरहेका पत्रकारका अगाडि । यदि प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो गरिएको भए, गर्नेले पनि यो थाहा पाउँथ्यो कि यस्तो काम पत्रकारको अगाडि गर्नु हुँदैन भन्ने ।
प्रहरीले हरेक शव भेटेपछि नांगेझार बनाएर हेर्छ र मुचुल्का तयार पार्छ । शरिरमा भएको सबै निलडाम, चोट मुचुल्कामा लेख्नु पर्ने हुन्छ । ताकि पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टर नझुक्किउन् ।
मानिसहरुले उखुबारीमै प्रहरीले शव पखालेर प्रमाण नष्ट गरेको भनेको छ । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने निर्मलाको गुप्तांगमा वीर्य कसरी भेटियो त ? चिकित्सकले निकालेको भेजिनल स्वावमा वीर्य भेटिएको छ । कपडामा पनि भेटिने भनेको अपराधीको वीर्य वा रौं हो । त्यो त भेटिएकै छ ।
कुकुर किन प्रयोग भएन ?
कुकुर कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ । कुनै बेला कुकुरले सहयोग गर्छ, कुनै बेला मिसगाइड गर्छ । खोला तरेर गएपछि कुकुरले सुँघ्न सक्दैन । घटनास्थलमा पानी,हिलो छ । अरु मानिसहरु पनि गएर घटनास्थलमा टेकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कुकुर लैजाने हो भने शव हेर्न जाने मानिसलाई कुकुरले इशारा गर्छ । अब के त्यहाँ शव हेर्न, फोटो खिच्न गएकालाई कुकुरले देखायो भनेर पक्राउ गर्ने ?
नहरवारि निर्मलाको कापी भेटिएको थियो । कापीमा किन कुकुरलाई सुँघाइएन भन्ने पनि प्रश्न छ । मैले कापीमा किन कुकुर प्रयोग गरिनँ ? भन्ने पनि छन् । मैले त कापी भेटेको भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको ड्रयरबाट हो । मैले घटनास्थलबाट कापी उठाएको होइन । मैले भेटेको अवस्थामा कापी सुँघाउने हो भने त जसले घटनास्थलबाट कापी उठायो, त्यही प्रहरीलाई कुकुरले भुक्छ ।
कापी किन भिजेन ? भन्ने प्रश्न छ । कापी प्लासिष्टक कोटेट छ । कापीको तीन छेउबाट केही भिजेको छ । पुरै लतक्क छैन । किनभने पानी चुर्लुम्म डुब्ने स्थानमा थिएन ।
प्रहरीले भिआइपी अपराधी जोगाउन दिलिप सिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाइयो भन्ने आरोप छ । दिलिप सिंह विष्टको सर्टको खल्ती च्यातेर घटनास्थलमा राखिएको भन्ने आरोप लागेको छ । डिएनए परीक्षणमा दिलिपसिंह विष्टको डिएनए म्याच गर्दैन । नगरेपछि प्रहरीले दिलिप सिंह विष्टलाई यातना दिएरै घटना स्वीकार गर्न लगाएको रहेछ, प्रहरीले फसाउने उद्देश्यले नै विष्टको सर्टको खल्ती च्यातेर घटनास्थलमा राखेको रहेछ भन्ने आम मानिसलाई पर्न गएको छ । बाह्रखरी भन्ने अनलाईनमा मैले सर्टको खल्ती च्यानेर घटनास्थलमा राख्न लगाएको भनेर प्रकाशित भयो । त्यो कुरा मेरै विभागका एक जनाले बाह्रखरीलाई भनेका रहेछन् । बाह्रखरीलाई सोध्दा रिलायबल सोर्स भनियो । स्रोत भनेको विभागका मानिसलाई मैले सोध्दा उनले मसँग माफी मागे ।
खासमा पछिल्ला समितिहरुले टर्चर दिन थालेछन् । भिआइपी जोगाउन अंगुर जिसीले सर्टको खल्ती च्यातेर राखेको भन् भन्दै ती हवल्दारलाई करकापमा पारेछन् । ऊ आफै दुर्घटनामा परेर दाँतमा स्टीर राखेर भोलिपल्ट डाक्टरलाई भेट्न जानु पर्ने अवस्थामा रहेछन् । के भन्दा मलाई छाड्ने हो ? भनेर उसले सोध्दा छानविन समितिका सदस्यहरुले प्रायोजित घटना हो भनेर स्वीकार गर भनेछन् । अनि उसले सर्टको खल्ती आफैंले च्यातेर राखेको भनेछन् । तर रिपोर्टमा डिएसपीले भनेर यसो गरेको भनेर आएछ ।
त्यस्तो बयान दिने हवल्दारले पनि मसँग माफी मागेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर, मैले त जे जे कबोल गर्नुपर्ने हो त्यो सबै लेख्नुस । म सही गरिदिन्छु भनेँ । खल्ती म आफैले च्यातेको भनेर स्वीकार गरेको थिएँ । त्यहाँ हजुरको नाम कसरी मुछियो म छक्क परेँ ।’
यो घटना अनुसन्धान गर्नका लागि गठन भएका अन्य समितिहरु पनि यहि सिद्धान्तलाई मियो बनाएर अनुसन्धानमा केन्द्रीत भएका छन् । उहाँहरुले डिएनए नमिलेपछि सबैकुराहरु प्रायोजित हुन् भन्ने माइन्ड सेट गरेर केन्द्रीत हुनुभएको छ ।
डिएनए नमिलेका कारण खल्ती, विष्ट, उसको बयान झुठ वा प्रायोजित हुन् भन्ने सिद्धान्तबाट पछिल्ला समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन लेखे । तर रेप र मर्डर केसमा डिएनए परीक्षण भएको निर्मलाको केसमा मात्रै हो । मैले शुरुदेखि नै भन्दै आएको यो हो कि डिएनए परीक्षण गर्ने पद्धति सहि छैन । अहिलेको डिएनए परीक्षण भनेको बाबु छोरा हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि गरिने पद्धती हो । यो निर्मला पन्त प्रकरणमा उपयुक्त छैन । मैले डिएनए परीक्षण कै प्रमाणिकता जाँच्नु पर्छ भनेँ । तर कसैले पत्याएन । अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फोरेन्सिक एक्स्पर्टहरुसहितको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्यो कि यो डिएनए परीक्षण विधि ठीक छैन । डिएनएकै मात्र आधारमा अपराधी खोजिनु वा छाडिनु हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग पनि कन्भिन्स भयो ।
हाम्रो टोलीका चार चार जना अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारबाही स्वरुप विभिन्न गणमा राखिएको छ । उनीहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । दुई हवल्दारले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् । उनीहरुलाई मानसिक यातना दिइएको छ । मलाई त निलम्बन नै गरिएको छ ।
अपराधी मैले लुकाएको भनियो । एक वर्षसम्म खै त मैले लुकाएको अपराधी अरुले बाहिर ल्याउन सकेको ? निर्मलाका खातिर मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ भन्ने धेरै बकम्फुसेहरु पनि भेटिए ।
डिएनए किन मिलेन दिलिपसँग ?
निर्मलाको डिएनए आमासँग मिल्यो । भेजिनल स्वावको नमुनाबाट निकालिएको डिएनए र दिलिपबीच मिलेन । के यो विधि सर्वस्वीकार्य सतप्रतिशत विश्वसनीय विधि हो ? मेरो प्रश्न यो हो । यो प्रश्न सुन्न कोही तयार थिएनन् । तर मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको डिएनए विज्ञहरुले मेरो प्रश्न सुन्न तयार भए । उहाँहरुले गरिँदै आएको डिएनए विधि गलत भएको ठहर गर्नुभयो । वंशज पहिचान गर्ने डिएनए परीक्षण गरिएको त अहिले आएर पुष्टि भयो । आयोगले त्यही भन्यो । व्यक्ति पहिचान गर्न नसकिने डिएनए परीक्षण गरिँदै आइएछ ।
अब डिएनए मिलेन भन्दैमा निर्मलाले न्याय नपाउने ? निर्मलाले न्याय पाउन अब के बलात्कार गरिरहेको भिडियो नै ल्याउने त ? पोखराको श्रीया सुनार भन्ने १० वर्षकी बालिकाको केसमा अभियुक्तले घटना स्वीकार मात्रै गरेको भरमा उमाथि मुद्धा दर्ता भयो । त्यो केसमा अभियुक्तले घटना स्वीकार गर्नेबाहेक केही पनि प्रमाण छैन । कतिपय केसमा प्राविधिक प्रमाण हुँदैन, अब के पीडितले न्याय नपाउने ?
दिलिप सिंह विष्टले आफूले देब्रे हातले निर्मलाको घाँटी थिचेर मारेको स्वीकार गरेका छन् । आफैंले बयानका क्रममा बलात्कार गरेको, आफैले मारेको बताएका छन् ।